Mpamily sa mpandeha an-tongotra? Mazava i Mercedes, ny mpamily aloha | Vaovao momba ny gadget
Mpamily sa mpandeha an-tongotra? Mazava i Mercedes, voalohany ny mpamily
Fiara mizaka tena Google.
Ny fiara mizaka tena no ho avy, mialoha izany dia tsy manana ahiahy isika. Na izany aza, amin'ny fotoana namoronana ny haitao vaovao dia misy ny fifandirana vaovao, amin'ity tranga ity dia hiresaka momba ny moraly an'ity karazana fiara ity isika, na ny tsy fisian'izany. Ny olana dia mitoetra amin'ny toe-javatra tsy ampoizina tsy azo ihodivirana, satria mety hitranga ny tranga, ny elektronika dia miatrika ny fisafidianana ny safidy eo amin'ny fiainana (na ny fiainana) an'ny mpandeha an-tongotra (na mpandeha an-tongotra), na ny an'ny mpanamory, ny tompony ary amin'iza no heverina fa trosa aminy. Na izany aza, i Mercedes dia mazava, rehefa misy fisalasalana, ny fiarany mizaka tena dia hanana ny safidiny mihoatra ny mpamily.
Araka ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny MIT (Massachusetts Institute of Technology), 76% n'ny mpampiasa no hiditra amin'ny fiara mizaka tenaNa izany aza, nilatsaka tamin'ny 33% io zavatra io rehefa nampandrenesina ny mpampiasa fa voapandahatra hamelezana ny ain'ny mpandeha ny fiara ho takalon'ny famonjena olona folo. Ity fanontaniana ity dia mipoitra tsikelikely amin'ny taha mitovy amin'ny fitomboan'ny fiara mizaka tena, raha ny marina ny mpiara-miasa aminay Jordi dia naneho hevitra fa i Otto dia nahavita ny 200 kilometatra nisesy voalohany tao anatin'ny iray amin'ireo kamionany.
Na izany aza, tsy manana ahiahy i Mercedes fa ny fiarany mizaka tena dia hitazona hatrany ny tanjona fa ho velona hatrany ireo mpandeha amin'ny fiarany. Noho izany, ny raharaha nikatona tamin'io lafiny io, ny fiara mahaleo tena Mercedes dia manana ny fanapaha-kevitra noraisin'ny fandaharana. Na izany aza, miova ny toe-javatra amin'ny orinasa tsirairay, ary manohy miasa izy ireo mba hahazoana antoka fa ny fiara mahaleo tena dia afaka mandray fanapahan-kevitra tsara indrindra momba ireo olana ireo ho an'ny tenany.
Inona ny hevitrao? Ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny fahaveloman'ny mpandeha na ny mpandeha an-tongotra Haharitra izany mandra-pifanarahan'ny orinasa momba azy, avelao izahay ny hevitray momba izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Mpamily sa mpandeha an-tongotra? Mazava i Mercedes, voalohany ny mpamily
Tokony hatao laharam-pahamehana ny ain'izay manao ny marina araka ny fenitra ara-dalàna sy ara-pitondrantena.
Mandeha any amin'ny afobe ny fitondran-tena rehefa tandindomin-doza ny fiainana dia miaro ny mpanjifany i Mercedez
vlm dia hoy izy:
Arovy ny ain'ny mpamily, raha mbola tsy voahitsakitsaka ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana.
Raha hisorohana kamio ianao dia mankeny amin'ny sisin-dàlana ary mihazakazaka mpandeha an-tongotra, heveriko fa i Mercedes sy ny tompon'ilay fiara dia hanana olana amin'ny famonoana olona.
Raha misy mamely ny arabe ary tapa-kevitra fa tsara kokoa ny mihazakazaka azy ireo toy izay mamono ny hafa, raha izany dia loza izany.
Mamaly an'i Vlm
Ariel Hernan Landaida Duarte dia hoy izy:
Tena tso-po aho, mieritreritra fa tsy hisalasala hamonjy, ohatra, ny zanako izay miaraka amiko noho ny mpandeha an-tongotra (mazava ho azy fa tsy mieritreritra aho fa izany no tokony hatao).
Valiny tamin'i Ariel Hernán Landaida Duarte
Ny fivarotana sy ny fidiram-bolan'i Apple dia mitohy mihena